ပြည်ပလာတာ/Pyay Paratha | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ပီလောပီနံကိတ်/Cassava Cake →
ပြည်မြို့က နာမည်ကျော် ပလာတာ ပြည်ပလာတာကို စားချင်နေတာကြာပြီ။ လုပ်မယ် လုပ်မယ်နဲ့ ခုမှပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။ မလုပ်စားဖြစ်တာ ၁နှစ်လောက်ရှိပြီ။ စားလို့လဲကောင်းလိုက်တာလေ။ ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ပူပူစပ်စပ်လေးပေါ့။ အာသာကိုပြေသွားတာပဲ။ ဒါကြောင့် ခုဒီ post လေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
I have been longing for this famous Paratha from Pyay, located in Irrawaddy river and 160 miles northwest of Yangon, Pyay Paratha for so long. Thinking of cooking it again and again but only this time I can manage. It’s been aboutayear now. I enjoyed it so much as it is hot and spicy and definitely satisfied my palate. That’s way I’d like to share this recipe.
-ကုလားပဲ ဆန်ချိန်ခွက် ၁ခွက်စာ (ရေစိမ်ထား)
Contents for5servings
–3slice into dices of potatoes
-1 rice cup of chundal to be immersed in water
– salt,chicken powder
-1tbl spoon of fish sauce
-3 pieces of garlic
-1tbl spoon of curry powder
-1tbl spoon of Marsala
-a bit of turmeric powder
တုံးထားသောအာလူးများကို ဆီပူတွင်အပေါ်ရေတင်းအောင် ကြော်လိုက်ပါ။ အာလူးအပေါ်ယံ ခပ်တင်းတင်း ဖြစ်သွားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ အာလူးတွေဟာ ကြက်သားဟင်းထဲမှာ ကြေမသွားမှာပါ။အဲလို ပုံမပျက်အာလူးအတုံးလေးတွေပါမှ စားလို့ကောင်းမှာပါ။
Fry the dices of potatoes until it’s skins areabit toughened as it is important otherwise it will be smashed when cook with chicken. And it looks better and more delicious if it is as it was.
ကုလားပဲကို ရေနဲ့ပြုတ်ပါ။ ကုလားပဲနူးပြီဆိုရင် ဆယ်ထားပါ၊
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ အရောင်တင်မှုန့် ၊ဆနွမ်း နဲနဲ၊ ပျဉ်းတော်သိမ်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့နဲ့ဆီသတ်ပြီး ကြက်သားဟင်းချက်ပါ။
Boil the chundal until it’s soft. Onions, garlic, curry powder, tumeric powder, curry leaves, salt and chicken power are to be slow cooked first then add the pieces of chicken.
ရေ၁လီတာခန့်ထဲ့ပြီ ပွက်လာတဲ့အခါ ကြက်သားတုံးလေးကို မြည်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကြက်သားတုံး နူးပြီဆိုရင် သံဆန်ခါနဲ့ ကုလားပဲကိုတိုက်ချကာ အဖတ်နဲနဲချန်ထားသောကုလားပဲအနှစ်ကိုရောပါ။အာလူးရောပါ။ ရေနဲနဲထပ်ထဲ့ပါ။
Addaliter of water into it until it bubbles up and see if the chicken is soft. If it is, then add the chundal after sieving and add potatoes. Addalittle bit more water.
မဆလာဖြူးပါ။ ရေကျဲကျဲ အနေတော် သောက်လို့၊ ဆမ်းလို့ရတဲ့ ကြက်သားအာလူးပဲရည် ပြည်ပလာတာဟင်းရည် ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
စားကာနီးမှ ready made ပလာတာလေးများကို ဒယ်ပေါ်မှာထောပတ်အနဲငယ်နဲ့ မီးအနေတော်ထားပြီးကြော်လိုက်ပါ။ ကြော်ပြီးသားပလာတာ ရွရွလေးများကို လက်ဖြင့်မွ၍၎င်း ကတ်ကျေးဖြင့်ညှပ်၍၎င်း အဖတ်လေးများ ပန်းကန်တချပ်ထဲပြင်ထားပါ။
Sprinkle the Marsala. Then, drinkable/edible thin gravy with chicken and potatoes are ready. Just before you eat, ready made parathas are to be fried with butter inamedium heat. The fried parathas can be cut into pieces after softening it by hands and put them intoaserving bowl.
အထက်ပါတို့ကို ပန်ကန်တချပ်ထဲ ထဲ့ကာစားပွဲပေါ်တွင်ပြင်ထား ပါ
Ingredients to enjoy with
-sprig the mints leaves
-thinly slice the green chilli
– thinly slice the onions
-slice the limes
All of these above are to put inaplate.
ပန်ကန်ထဲတွင်ပလာတာဖတ် နည်းနည်းနဲ့ အလွန်ပူနေသောဟင်းရည်နဲ့ ကြက်သား အာလူးတို့ကို ပန်းကန်အပြည့်နီးပါး ထည့်ပြီး ကြက်သွန်များများလေးထည့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးများဖြူး၊ သံပရာရည်လေး ညှစ်ပြီး မွှေပြီးစားရတာအလွန်အရသာရှိပါတယ်။ တရှူးရှူးတရှဲရှဲနဲ့ အလွန်စပ်အလွန်ကောင်းကာပူပူလေးစားရတဲ့ ပြည်ပလာတာလေးပါ။
Inaserving bowl, add the cut pieces of parathas and pour the extremely hot chicken and potatoes gravy until the bowl it almost full. Then sprinkle with thinly sliced onions, sliced green chilli, squeeze the lime then enjoy this delicious and yummy pyay paratha. It is hot and spicy and very good indeed, it is called Pyae Paratha.
One comment on “ပြည်ပလာတာ/Pyay Paratha”
03/02/2013 @ 9:16 am
ပလာတာ လုပ်နည်းလေး စောင့်မျှော်လျှက်ပါ။